Wax soosaarka goobta Shiinaha ee sawirka goobta sawirka 5 warshadaha iyo iibiyaasha | Hongli
Shaqada xakamaynta korantada
Waxaa jira laba qaab. Moodhka koowaad waa moodel caadi ah, midka labaadna waa habka dayactirka. Waa xaalad caadi ah marka dhammaan tuubooyinka aan dayactirka lahayn ee qolka mashiinka kore iyo kuwa hoose la geliyo. Koronto-yaraha ayaa la bilaabay inuu ku iibsado shaqaalaha furaha markii uusan qofna ku jirin. Shaqaaluhu waxay riixeeyaan batoonka joogsiga si ay u joojiyaan wiishka. Markuu nambarka furaha helo, waxaa la bilaabayaa wuxuuna ku shaqeeyaa xawaare lagu qiimeeyay. Ka qaad mid ka mid ah qalabka wax dayactirka ah oo geli sanduuqa dayactirka habka dayactirka. Isticmaalaha ayaa adeegsan kara sanduuqa dayactirka si uu u furo jaranjarada. Waxaa jiri kara hal sanduuq adeeg oo keliya qolka mashiinka sare iyo kan hoose. Haddii laba sanduuq adeeg la geliyo isku waqti, wiishashka lama bilaabi karo.
Pedal wuxuu isticmaali karaa geedka aluminiumka oo dhan ee bir-gashiga aluminiumka ah ama bir bir-qabad bir ah oo bir aan nadiif ahayn. Sababta oo ah waxay leedahay miisaan fudud, saxsan sare iyo muuqaal qurux badan. Rolle ste steial wuxuu ka samaysan yahay awood sare oo laga soo dhoofiyay polyurethane.
Silsiladda wadista tallaabada waxay qaadataa rinjiga buufinta si looga hortago miridhku. Qaybta u janjeedha waxaa taageeraya taarikada tareenka hagida dhexe. Tilmaanta dhexe ee tareenka taakuleynta tareenka waxaa laga sameeyay qalabka CNC. Tareenka hagaha dhexe wuxuu ka kooban yahay astaan ​​muuqaal ah, anti-mirvanized anti-miridhku.
Wadida iyo qalabka xiisadu waa dhamaan. Wadada loo yaqaan 'Drive sprocket' wuxuu u baahan yahay ilkaha gorgorka si ay u wada shaqeeyaan. Mashiinka xiisadda kicinaya waa inuu isbarbar dhigaa. Iyo guddiga loo yaqaan 'apron board' sidoo kale waxay ciyaaraan door ka hortagga qalloocinta. Waxay kaloo u shaqeysaa sidii tareenka loo yaqaan counter counter, ka horjoogsada tallaabooyinka inay soo dhacaan oo hoos u dhacaan.
Aruurinta goobta kulanka wacyigelinta goobta sawirka 4
Qalabka kulanka koox wacyigelinta goobta sawirka 2
Aruurinta goobta kulanka wacyigelinta goobta sawirka 1